Field Admin Supervisor | Solar Home Myanmar ﻿
Field Admin Supervisor
5.9.2019, Full time , Energy / Utilities
Company: Solar Home Myanmar
•	နေ့စဉ်၊အပတ်စဉ်၊လစဉ် ရုံးခွဲနှင့်ပတ်သတ်သော အစီရင်ခံစာများအတွက် လိုအပ်သော အချက်အလက်များကို ရုံးခွဲမန်နေဂျာများဆီမှ တောင်းယူပြီး အချိန်မီ ပြင်ဆင်ပြုစုပေးရန်။
•	ရုံးခွဲအစည်းအဝေးများအတွက်လိုအပ်ပါက ရုံးခွဲမန်နေဂျာနှင့်တိုင်ပင်၍ အရောင်းနှင့် ဈေးကွက်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို သုံးသပ်ပြင်ဆင်ပေးရန်။
•	ကုန်ပစ္စည်းသိုလှောင်ရုံအားစီမံခန့်ခွဲရန်နှင့်ကုန်ပစ္စည်းအ၀င်အထွက်စာရင်များ ၊ လက်ကျန် ကုန်ပစ္စည်းစာရင်းများအား မှန်ကန်စွာဖြည့်သွင်းရန်နှင့်ကုန်ပစ္စည်း၏ မျက်မြင်အခြေအနေနှင့် ရောင်းအားကို ချင့်ချိန်ပြီးရုံးခွဲမန်နဂျာနှင့် တိုင်ပင်၍ ကုန်ပစ္စည်းအမှာစာ ကို ရုံးချုပ်သို့ ပို့ပေးရန်။
•	လစဉ်ဝန်ထမ်းများ၏ ရုံးတက်စာရင်းအားပြီးပြည့်စုံစွာပြင်ဆင်ပြီး ၀န်ထမ်းရေးရာဌာနသို့ ပေးပို့ပေးရန် နှင့် ၀န်ထမ်းများ၏ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနှင့်သက်ဆိုင်သော လုပ်ဆောင်ချက်များ ကို ရုံးခွဲမန်နေဂျာနှင့်အတူ ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ပေးရန်။
•	ရုံးခွဲ၏ ရုံးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများကို ကြီးကြပ်ရန်။
•	(ရုံးခွဲနှင့်သက်ဆိုင်သောအစိုးရရုံးလုပ်ငန်းများ၊ ရုံးခွဲလိုအပ်ချက်များဝယ်ယူဖြည့်ပေးခြင်း၊ နေ့စဉ် အရောင်းရုံးခွဲများနှင့်ပတ်သတ်သော အသုံးများ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးပို့ခြင်းလက်ခံရယူခြင်းကိစ္စရပ်များ)
•	ရုံးသို့ ဖောက်သည်များမှ ဖုန်းဖြင့် ဆက်သွယ် မေးမြန်းခြင်းများအတွက် ဖြေကြားပေးရန်
အသေးစိတ် ငွေသုံးစာရင်းအားစီမံကိုင်တွယ်ပြီး အသုံးစရိတ်မှတ်တမ်းများကို ပြုစုပြီး ရုံးချုပ်သို့ တင်ပြရန်။
•	ရုံးခွဲရှိအရောင်းဝန်ထမ်းများမှ ကောက်ယူလာသော ငွေကြေးများကို စုစည်းပြီး ဘဏ်မှ တဆင့်ရုံးချုပ်သို့လွှဲပေးရန်။
•	ရုံးခွဲမန်နေဂျာအား ရုံးခွဲ နှင့်ပတ်သတ်သော အစီရင်ခံစာများကို ကူညီပြင်ဆင်ပေးရန်
လစဉ် Incentive နှင့်ပတ်သတ်သော အချက်အလက်များကို ပြင်ဆင်ပြီးရုံးချုပ်အရောင်းဌာနသို့ပေးပို့ရန်။
• ဘွဲ့ရ lCCI level 1 &2ပြီးထားရမည်။ Stock ပိုင်းကို သေချာတိကျစွာကိုင်တွယ်နိုင်ရမည်။
• Excel အား ကျွမ်းကျင်စွာသုံးနိုင်ရမည်။ Accounting Software တစ်ခုခု သုံးဘူးသူအား ဦးစားပေးမည်။
• စာရင်းနှင့်သက်ဆိုင်သောလုပ်ငန်း၊ စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် အရောင်းစီမံ အနေဖြင့် လုပ်သက်အနည်းဆုံး (၁) နှစ် လုပ်ကိုင်ဘူးရမည်။
• စာရင်းပြုစုခြင်း ၊ ငွေစာရင်းစီမံခန့်ခွဲခြင်း၊ နေ့စဉ် အသေးသုံးငွေစာရင်းများကိုင်တွယ်ခြင်းနှင့် ဘဏ်နှင့်ချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်ရသောလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။
• အသင်းအဖွဲ့နှင့် အတူအလုပ်လုပ်နိုင်ရမည်ဖြစ်ပြီးရိုးသားဖြောင့်မတ်ရမည်။
Work location Lay Daung Kan 54, Yangon (၄.၁၅ mi) Yangon,Myanmar.
16 Days, Full time , Energy / Utilities
• Act asaservice manager for HR processes and also as an intermediary between Head Quarter and Hubs in terms of workforce planning, Talent sourcing, Organization Design, learning & Development and Hub Maturity & Development. • Developing, coordinating and tracking training for staff • Coordinating and tracking assessments of knowledge for all levels of employees • Managing annual salary surveys • Analyzing and updating the company’s salary budget • Developing, analyzing and updating the company’s evaluation progr ...
Area Sales Executive (တောင်တွင်းကြီးမြို့)
•	မိမိတာဝန်ကျရာနယ်မြေအတွက် ကုမ္ပဏီမှ ချမှတ်ထားသော အရောင်းစံချိန်စံနှုန်းများကို ပြည့်မီစေရန် တာဝန်ခံယူရောင်းပေးနိုင်ရမည်။ အိမ်တိုင်ရာရောက်သွားရောက်ရောင်းချ တပ်ဆင်ပေးရမည်။ •	မိမိတာဝန်ယူထားသောန� ...
Branch Manager (ကျောက်ပန်းတောင်း & တောင်တွင်းကြီး)
103 Days, Full time , Energy / Utilities
•	လစဉ်၊ နှစ်စဉ် မိမိတာဝန်ယူထားသော ရုံးခွဲအလိုက် သတ်မှတ်ထားသော target များပြည့်မှီအောင် နည်းဗျူဟာများချမှတ်အကောင်အထည်ဖော်ရန်။ •	အရောင်းဌာန၏ ကုန်ကျစရိတ်နှင့် အရောင်းအားခြေအနေကိုသေချာစွာစီစစ်၍ ကုန်က ...
Area Sales Executive (ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့)
Senior Finance And Account Executive
•	Manage and prepare bank statements while doing reconciliation as daily checking of receipt from bank statement with QB. •	Preparation of all payments (Suppliers, Payroll and etc). •	Provide and record accounting information relating to the all general ledger transactions in the bank statements. •	Review and manage payments prepared by junior staff (Advance, rental). •	Perform day to day accounting and record keeping of all GL transactions. •	Checking, analyzing and controlling operating expenses spent by Hubs through the coun ...
142 Days, Full time , Energy / Utilities
•	Administration and efficient daily operation ofafull service branch office, including operations, financing , market handling (distribution & market share), product sales, customer service, budget activities (sales & expense) , stock balancing & sales focus , competitor activities & re-attack suggestion plan and security and safety in accordance with the company objectives. •	Develops business; providesasuperior level of customer relations and promotes the sales and service culture through coaching, guidance and staf ...
Job ads in FMCG jobs and in Shan State
•	နေ့စဉ်၊အပတ်စဉ်၊လစဉ် ရုံးခွဲနှင့်ပတ်သတ်သော အစီရင်ခံစာများအတွက် လိုအပ်သော အချက်အလက်များကို ရုံးခွဲမန်နေဂျာများဆီမှ တောင်းယူပြီး အချိန်မီ ပြင်ဆင်ပြုစုပေးရန်။ •	ရုံးခွဲအစည်းအဝေးများအတွက်လိုအပ်� ...
•	Solar Home Myanmar Company မှ ဒေသခံများအတွက် လစာ၊ ခံစားခွင့် ကောင်းကောင်းဖြင့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းကောင်းများကို ကမ်းလှမ်း လိုက်ပါသည်။ အင်တာဗျူး အမြန်ဆုံး (ချက်ချင်း) ဖြေဆို ရပါမည်။ လုပ်ငန်းတာဝန်ဝတ္တရားများ � ...
• Responsible for the sale ofabusiness’ products or services inaspecified region or geographical area. • Provide ongoing support to distribute and produce to product or service. • Manageasales team in the specified area. • Ensure profitable growth in sales, revenue through planning, execution and management ofasupportive team • Collaborating with senior executives to establish and executeasales goal for the region • Managingasales team in order to maximize sales revenue and meet or exceed corporate-set goals � ...
•	Act asaservice manager for HR processes and also as an intermediary between Head Quarter and Hubs in terms of workforce planning, Talent sourcing, Organization Design, learning & Development and Hub Maturity & Development. •	Guide & ensure management of talent and poor performers with the line Managers. Review employee KPIs for Hubs & provide Line Managers guidance on actions Manage HR escalations and disputes	•	Identification of Training Needs through consultation with managers and BU heads based on Plan the Exe ...
Field Admin Supervisor Admin, Secretarial & PA jobs Joblesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss JobsInYangon Solar Home Myanmar Admin, Secretarial & PA jobs Admin, Secretarial & PA jobs Energy/Utilities Jobs in Myanmar, jobs in Yangon
Shan State 142 Days